चितवनका यी शिक्षकले छात्राहरुलाई के गरे यस्तो? बिद्यार्थीले नै कालोमोसो दल्नु पर्यो – Dainiki Online
19/03/2021 19/03/2021 adminLeaveaComment on चितवनका यी शिक्षकले छात्राहरुलाई के गरे यस्तो? बिद्यार्थीले नै कालोमोसो दल्नु पर्यो
चितवनको नारायणगढस्थित एक विद्यालयका शिक्षकलाई कालोमोसो दलिएको छ । उनले छात्राहरुमाथि नराम्रो ब्यवहार गरेको भन्दै बिद्यार्थीले नै कालोमोसो दलेका हुन् ।यस्तो ब्यवहार गर्ने शिक्षकलाई माफी माग्न भनिएपनि नमानेकाले यस्तो काम गर्नु परेको एक बिद्यार्थीले बताए ।त्यहाँको बालकुमारी माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक शशीधर गैरेले छात्राहरुलाई त्यस्तो ब्यवहार गरेको भन्दै कक्षा ११ र १२ विद्यार्थीहरुले कालोमोसो दलेका थिए ।गैरेले छात्राहरुलाई अनुचित ब्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै बुधबार विद्यालय परिसरमा नै कालोमोसो दलेका थिए ।
अन्य समाचार: आमा भनेको शब्द हो जसले सबैलाई भावनाहरूले भर्दछ। नेपाली शब्दकोश मा आमा लाई जननी,माता,महतारी ,जन्मदिने स्त्री का पर्यायका रूपमा अर्थाइएको छ । आमा पक्कै पनि सबैको जीवनमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। आमाको बच्चाको लागि पक्कै पनि कुनै कुराको तुलना गर्न सकिँदैन।उनको माफीको स्तर अपरिवर्तनीय छ। एउटी आमा कुनै पनि गल्तीलाई क्षमा गर्न सक्षम छ। आमा सबैको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिला हुन्। एउटी आमाले आफ्नो बच्चाको लागि खुसीको त्याग गर्छिन्। अरू कसैले पनि आफ्ना बच्चाहरूको लागि आमाले जस्तै हेरचाह गर्न सक्दैनन्।
सबै भन्दा पहिले, आमाहरू अत्यधिक जिम्मेवार महिला हुन्। तिनीहरू निश्चित रूपमा एक बच्चाको पालनपोषण मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। सब भन्दा उल्लेखनीय कुरा, आमाहरू बच्चाको दृष्टिकोण निर्धारित गर्न ठुलो भूमिका खेल्छन्। भविष्यमा बच्चा राम्रो होस् वा खराब, आमामा निर्भर गर्दछ। आमाले सिकाउनुभएको नैतिक मूल्यमान्यताहरूले सम्भवतः ठुलो भूमिका खेल्छन्। व्यक्ति प्रायः बुढेसकालसम्म उनीहरूको आमाको मान याद गर्दछ। त्यस कारण, समाजको भलाइको लागि आमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। समाजको भविष्य ठुलो रूपमा आमाको शिक्षणको परिणाम हो।
आमाहरू आफ्ना बच्चाहरूसँग गहिरो सम्बन्ध साझेदारी गर्दछन्। यो जडान निश्चित रूपमा अरू कोहीले मिल्दैन। बुवाहरू पनि बुझ्ने प्रकारको स्थापना गर्न असफल। यस जडानको उत्पत्ति बाल्यावस्थाबाट हुन्छ। सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा के छ भने, एउटी आमाले आफ्नो शिशु बच्चालाई कुराकानी बिना नै बुझ्न सक्दछ। यसले निश्चित रूपमा आमा र बच्चाको बिचमा बलियो भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि आमाले हामीलाई भोक लागेको महसुस गर्न सक्दछन्।